The Ab Presents Nepal » कति कमाउँदा राज्यलाई कति कर तिर्नुपर्छ? यस्तो छ सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ आयकर दर !
कति कमाउँदा राज्यलाई कति कर तिर्नुपर्छ? यस्तो छ सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ आयकर दर !
काठमाडौं-: व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि राज्यका हरेक नागरिकले सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनैपर्छ। जानाजान वा अन्जानमा तपाईंले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ।
आर्थिक विधेक २०७६’ मा व्यवस्था गरिएको आयकरका दर /अविवाहितको हकमा (वार्षिक) लाग्ने आयकरः